“Fanohintohinana ny filaminam-bahoaka”: nisalasala ny fitsarana, noafahana madiodio i Ravo Nambinina | NewsMada
Didim-pitsarana fampitoniana ? Afaka madiodio noho ny fisalasalana tamin’ny fitoriana sy fiampangana azy ho nanohintohina ny filaminam-bahoaka i Ravo Nambinina Ramasomanana. Na izany aza, nodidin’ny fitsarana handoa lamandy iray tapitrisa ariary izy.
Fanapahan’ny fitsarana, omaly izany, araka ny daty voatondro namoahana ny valin’ny fotoam-pitsarana azy, ny 15 novambra lasa teo. Manoloana ity didy navoakan’ny fitsarana ity, tsy afa-po ny mpisolovava sy ny tenany fa hampiakatra ny raharaha. Tsiahivina fa i Ravo Nambinina Ramasomanana, ilay mpiasa teo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana nanao ampamoaka momba ny kolikoly maro eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana. Nasehony avokoa ireo fandaniam-bola mihoa-pampana tsy ara-dalàna sy fanodinkodinana tamin’ny tsenam-baro-panjakana tao amin’io minisitera io. Manoloana ity raharaha ity, voampanga ho manohintohina ny fiandrianam-pirenena izy noho io filazany ny zava-misy tao amin’io minisitera io, indrindra ny fahasahiany mitoroka ary ny ady amin’ny kolikoly.
Nanameloka ny fanenjehana azy ny firaisamonim-pirenena…
Nanamafy izany rahateo koa ny porofo nentin’i Ravo Nambinina Ramasomanana niaraka tamin’ny mpisolovava azy momba ny taratasim-bola nampiasaina ho antoka tamin’ny tsenam-panjakana momba ny “centre de transplantation rénale” eny Andohatapenaka. Tsenam-panjakana maro no nolazainy fa ananany porofo marobe momba ny fanodinkodinam-bola tao amin’ity minisitera ity. Anisan’izany ny eny Andohatapenaka, mitentina 930 tapitrisa Ar.
Samy nanameloka ny fanenjehana an’i Ravo ny fikambanana samihafa, toy ny fivondronamben’ny Fiarahamonim-pirenena, ny fikambanana mpiaro ny zon’olombelona, ireo mpiatsehatra politika, na teto an-toerana na tany ivelany. Ho azy ireo, mpampaneno lakolosy Ravo. Nitatitra ny vaovao sy ny fisamboran’ny fanjakana azy koa ireo gazety sy fampahalalam-baovao iraisam-pirenena. Niampanga ny raharaha kolikoly sy ny fanodinkodinam-bola tao amin’ny sampandraharaham-panjakana misy azy momba ny fitantanana ny ady amin’ny covid-19 izy nandritra ny vanim-potoana voalohany tamin’ny vonjy taitra ara-pahasalamana. Natahotra ny fanjakana ka niezaka nandamina ity raharaha ity tamin’ny alalan’izao didim-pitsarana izao?